[OFFICIAL] akuthembisayo Wondershare IMIKHIQIZO
ZETHEMBISO FOR Wondershare IMIKHIQIZO
Siyabonga kubo bonke program lwethu neze kokumisa ukuhlinzeka isofthiwe top-zibalwa, Marketing and Service Customer neminyango ngokugcina uxhumene eduze namakhasimende ethu othandekayo, Wondershare unikelwe ukukhonza abasebenzisi 50 000 000+ kule minyaka engu-13 edlule. Wondersharers babe futhi akasoze alukhohlwa zithembiso bese ugcine ngokusisiza amakhasimende ukujabulela ukuphila emangalisayo digital.
Wondershare izimisele ukuvikela ubumfihlo bakho. Lonke ulwazi lakho siqu iyabethelwa ubuchwepheshe oluseqophelweni bavikelekile noma yikuphi ukusetshenziswa enonya.
SOFTWARE FOR IFONI / ITHEBULETHI
isofthiwe Wondershare amafoni / amaphilisi ofunda kuphela ulwazi kudivayisi yakho, afeze imisebenzi olunikezwa software. Ukwaziswa kwakho komuntu siqu ngeke kwi-software noma kunoma iyiphi uhlobo ifu.
I-Web: website Wondershare olusemthethweni ivikelwe lwezokuphepha like Qualys 'SSL AMALEBHU futhi yaqinisekiswa ukuthi sizohlangana ezindinganisweni eziphakeme.
Software: isofthiwe Wondershare 100% ephephile, kungekho igciwane noma malware; aqinisekisiwe yi iningi isofthiwe anti-virus like McAfee, Norton, AVG, njll
Ayikho Ukulimala Idatha yohlelo lokusebenza
Kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa isofthiwe Wondershare ukuphatha, ukudluliswa, noma uthole idatha uhlelo lokusebenza kwiselula yakho / amaphilisi, sesiqiniseka isofthiwe Wondershare kuletha nhlobo ukulimala idatha ekhona lokusebenza ocingweni / tablet.
Siyayazisa wonke amakhasimende ethu bese enze ukunikeza kakhulu kwamakhasimende. Siyaqonda ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba banake okugcwele amazwana ukukhathazeka kwakho. Njengoba amakhasimende ethu, wena kuqala kithi eliphakeme.
Zama ngaphambi kokuthenga nge Isivivinyo samahhala - futhi ngisho nangemva ukuthenga kwakho, Usavikelikile yethu sezinsuku ezingu-7 sokubuyiselwa imali .
Updates MAHHALA & DOWNLOAD, LIFETIMW
Izibuyekezo Khulula, sekukonke
Njengoba amakhasimende ethu, unelungelo ukujabulela izibuyekezo mahhala esaphila, okusho ukuthenga Wondershare imikhiqizo uthola hhayi kuphela enguqulweni yakamuva kodwa zonke izibuyekezo esizayo khulula.
Play Khulula, sekukonke
Noma nini udinga faka software, ungahlala ulande inguqulo yakamuva kusukela website esemthethweni Wondershare.
DOWNLOAD nganoma isiphi isikhathi
Namanje Ayikwazi Thola Lokho Okudingayo? Cela Team Ukusekela Usizo >>
13 iminyaka isipiliyoni IDATHA Recovery